Isaphulelo seNtsholongwane yokutshiza umatshini womatshini wokuvelisa kunye neFektri | Xiong Ewe
Izinto ezenziwe nge-polyurethane zinegalelo elininzi njenge-induction, ukufudumeza ubushushu, ingxolo yokubonisa kunye nokubulala njl njl. Isetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezininzi ezinobungqongileyo kunye nokusindisa umbane kunye nokugcina ubushushu kungcono kunezinye izinto.
Izinto eziluncedo zomatshini wokutshiza:
1.Umatshini wokucinezela womoya uneempawu zesayizi encinci, ubunzima bokukhanya, inqanaba lokungaphumeleli okuphantsi, ukusebenza okulula kunye nentshukumo efanelekileyo;
2. Iindlela eziphambili zokungenisa umoya zenza ukuba izixhobo zisebenze ngokuzinzileyo;
3. Isixhobo sokucoca izinto ezininzi sinokunciphisa ukuvaleka kwesitshizi;
4. Inkqubo yokukhusela ukuvuza okuninzi inokukhusela ukhuseleko lwabasebenzisi;
5. Ifakwe inkqubo yotshintsho olungxamisekileyo, enokuthi iphendule ngokukhawuleza kwimeko ezingxamisekileyo;
6. Inkqubo yokufudumeza inokufudumeza impahla eluhlaza ikwimeko efanelekileyo ukuhlangabezana nolwakhiwo oluqhelekileyo lwezixhobo;
I-7, ipaneli yokusebenza yezixhobo icwangcisiwe njenge-humanized setting, kulula ukuyazi indlela yokusebenza;
8. Umpu omtsha wokutshiza uneenzuzo zesayizi encinci, ubunzima bokukhanya kunye neqondo lokungaphumeleli okuphantsi;
9. Impompo yesondlo yamkela indlela enkulu eyahlukileyo yomlinganiso, enokuthi ngokulula ikondle izinto xa i-viscosity yemathiriyeli iphezulu ebusika;
Umthombo wamandla: isigaba esinye se-220V 50HZ (sinokwenziwa ngokwezifiso)
Ukufudumeza amandla: 7.5kw
Imo yokuqhuba: womoya
Umthombo womoya: 0.5-0.8MP≥0.9m3 / umzuzu
Imveliso eluhlaza: 2-12 kg / min
Ubuninzi boxinzelelo lwemveliso: 11Mpa
Umlinganiselo wemveliso ye-AB AB: 1: 1
Isixhobo soMgangatho oMiselweyo:
Umatshini ophambili: 1 iseti
Spray umpu: 1 iseti
Impompo Ukuphakamisa: 2 iiseti
Umgqomo isinxibelelanisi: 2 iiseti
Imibhobho yokufudumeza: ii-15meters (ezinde ezingama-60meters)
Spray izihlanganisi umpu: 2 yeemitha
Ibhokisi yokufikelela: 1 iseti
Incwadana yemiyalelo: ikopi enye
Ubukhulu becala ukugalela ulwakhiwo, ukutshiza ulwakhiwo, indawo yokupakisha.
Ukutshiza: Ukwakha ngaphandle kunye nokutshiza ngaphakathi eludongeni, ukutshiza okubandayo kokugcina, ukufakela ikhabhathi kunye nokungaxoli kwemoto kunye nebhasi, ukufakwa kophahla kunye nokungena manzi, iilori ezifrijiweyo kunye nokutshiza okuchasayo kwimizi-mveliso.
Ukuthululela: isifudumezi-manzi selanga, ifriji, isikhenkcisi, imijelo yombhobho, ukogquma ucango, ukugoba iimveliso kunye nokupakisha, ucango lwe shutter, ucango lokhuseleko, ulwakhiwo lwendlela, udonga lwengxolo, imodeli yomhlaba njl.
Egqithileyo ubuhlalu be-eps amagwebu
Okulandelayo: Umatshini Ukwaleka
PSF I Chwetheza Ngokuzenzekelayo Ukupheliswa kwangaphambi kwe-exp ...